Ratsiraka, Zafy ary Ravalomanana:NIHITSOKA TANY JOHANNESBURG -
AccueilRaharaham-pirenenaRatsiraka, Zafy ary Ravalomanana:NIHITSOKA TANY JOHANNESBURG
Feno fito taona katroka izao ny Maputo III, nandinihana ny Tondrozotra nivoahan’i Madagasikara tamin’iny krizy 2009 niarahan’ireo ankolafy efatra avy amin’i Andry Rajoelina, Didier Ratsiraka, Zafy Albert ary Marc Ravalomanana. Tsy nanatrika ity Maputo III ity anefa ny lehiben’ny fanonganam-panjakana Andry Rajoelina, izy indray mantsy no niampanga ireto filoham-pirenena telolahy teo aloha ireto ho nanao fanonganam-panjakana raha nandray fanapahan-kevitra ho amin’ny fiaraha-mitantana teo anatrehan’ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Vokany, tsy navelan’ny fitondrana jadon’ny Tetezamita nody an-tanindrazana ny filoha teo aloha Zafy Albert sy Didier Ratsiraka, ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana moa efa mazava fa ny ainy mihitsy no ahiana raha manitsaka ny seranam-piaramanidin’Ivato tamin’izany fotoana.
Nihitsoka dimy andro tany Johannesburg ireto filoham-pirenena teo aloha mpitarika ny ankolafy Ratsiraka sy Zafy ireto taorian’ny hafatra nomen’ny minisiteran’ny Fitaterana sy ny Filaminana Anatiny, ny amin’ny tsy fahafahan’izy ireo mandingana ny sisin-tanin’i Madagasikara araka ny baikon’i Andry Rajoelina. Efa rakotra miaramila mirongo basy rahateo koa ny seranan’Ivato tamin’izany. Nampiteny ny anarany mihitsy izany Andry Rajoelina izany nandritra iny Tetezamita iny, nampihorohoro lavitra noho ireo mpitondra jadona nalaza tamin’ny fanonganam-panjakana teto Afrika.
Voatery niditra an-tsehatra namaha ny olana mihitsy moa ny ambasadaoron’i Etazonia, Alemana ary Afrika Atsimo. Marihana fa isan’ireo nihitsoka tany Johannesburg ny praiminisitry ny Tetezamita teo aloha, Mangalaza Eugène izay voatery niala teo amin’izany toerana izany taty aoriana noho ny fandrahonana ho faty nataon’ny mpitondra Tetezamita taminy.
Naneho ny tsy fankasitrahany izany fihetsiky ny mpitondra jadona Tetezamita izany moa ny filoha roalahy teo aloha Zafy Albert sy Didier Ratsiraka tahaka ny hoe: “inona no fepetra ahafahan-dRajoelina misakana ny fodianay an-tanindrazana? Ny taonany sa ny diplaomany?”, hoy ny profesora; “Hotsarain’ny tantara sy ny vahoaka eo i Andry Rajoelina amin’izao zavatra ataony izao…!”, hoy kosa ny amiraly.
Santionany tamin’ny jadona sy ny fanamparam-pahefana nataon’i Andry Rajoelina nandritra ny dimy taona nampahoriany ny Malagasy izany ka nahatonga ny sazy sy ny ankivy maro avy amin’ireo firenen-dehibe sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Niantraika tany amin’ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka mivantana izany sazy izany ka namotika ny toekarena sy ny sosialy. Tafaverina tanteraka tao anatin’ny roa taona monja anefa izay fiaraha-miasa sy fifampitokisana eo amin’i Madagasikara sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena izay noho ny ezaky ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Porofon’izany ny COMESA, ny Frankofonia ary ny diniky ny mpamatsy vola iraisam-pirenena izay natao tany Parisy farany teo.
Taorian’ny fangatahana napetraky ny CENI teny anivon’ny fitsarana ambaratonga voalohany, dia nampidirina anatin’ ny lisi-pifidianana ireo anarana latsaka noho ny olana teknika. Aorian’izay rehetra izay kosa dia hiroso avy hatrany amin’ ny fanotana ny lisitra ...Tohiny